Iyo Backlink: Tsananguro, Direction, uye Njodzi | Martech Zone
Kutaura chokwadi, pandinonzwa mumwe munhu achitaura izwi Backlink sechikamu chehurongwa hwese ini ndinowanzo tenderera. Ini ndichatsanangura kuti sei kuburikidza neichi posvo asi uchida kutanga neimwe nhoroondo. Pane imwe nguva, injini dzekutsvaga dzaimbove hombe madhairekitori ayo ainyanya kuvakwa uye akarairwa zvakanyanya senge dhairekitori. Google's Pagerank Algorithm yakachinja mamiriro ekutsvaga nekuti vakashandisa zvinongedzo sehuremu hwekukosha.
Chinongedzo chakajairika chinotaridzika seichi:
Keyword kana Chirevo
Anouya hyperlink kubva kune imwe duraini kana subdomain kune yako domain kana kune yakatarwa kero yewebhu.
Semuenzaniso: Masosi maviri anoshuvira kuverengerana kune rakakosha kiyi. Kana Saiti A yanga iine zana ma link anonongedza pairi nezwi rakakosha mune backlink anchor zvinyorwa, uye Saiti B yaive nemakumi mashanu manongedzo akanongedzera kwairi, Saiti A yaizokwira kumusoro. Nehuwandu hwevanhu vari kutendeuka kubva kunjini dzekutsvaga, iwe unogona kungofungidzira zvakazoitika zvinotevera. A $ 100 bhizimusi indasitiri yakaputika uye asingaverengeki SEO masangano akavhura shopu. Masayiti epamhepo akaongorora zvinongedzo akatanga kutora madomeni, achipa mainjiniya ekutsvaga nekiyi yekuona nzvimbo dzakanakisa dzekubatanidza kuwana vatengi vavo chinzvimbo chiri nani.
Ehe, sando yakawa sezvo Google yakaburitsa algorithm mushure mealgorithm kutadzisa iyo mitambo yemhando nekugadzirwa kwe backlink. Nekufamba kwenguva, Google yakatokwanisa kuziva makambani ane kushungurudzwa kwakanyanya backlink uye vakavaviga mumainjini ekutsvaga. Mumwe muenzaniso wakaziviswa kwazvo waive JC Penney, uyo akange aripira SEO agency yaive kugadzira backlinks kuvaka yavo chinzvimbo.
Iye zvino backlinks dzakayerwa zvichienderana nekukosha kwenzvimbo yacho kune iro rakakosha musanganiswa. Uye kuburitsa toni yemumvuri zvinongedzo pane saiti zvisina chiremera izvozvi zvinogona kukuvadza domain yako pane kuzvibatsira. Nehurombo, kuchine Vanotsvaga Enjini yekuvandudza maAgency uye maAgency ayo anotarisa pane backlinks semushonga wekuzadzisa vatengi vavo zvirinani chinzvimbo.
Haasi ese Backlinks Akagadzirwa Akaenzana
Backlinks inogona kunge iine zita rakasarudzika (brand, chigadzirwa kana munhu), nzvimbo, uye kiyi kiyi inosanganisirwa nayo (kana musanganiswa wayo). Uye iyo duraini iri kubatanidza inogona zvakare kuve inoenderana nezita, nzvimbo kana kiyi kiyi. Kana iwe uri kambani yakavakirwa muguta uye uchinyatso kuzivikanwa mukati meguta iro (iine backlinks), unogona kukwira kumusoro muguta iro asi kwete mamwe Kana yako saiti ichienderana nezita rezita, hongu, iwe ungangodaro uchizokwira kumusoro pamusoro pemazwi akakosheswa neiyo mhando.
Kana isu tichiongorora masosi ekutsvaga uye mazwi akakosha anoenderana nevatengi vedu, isu tinowanzo tarisa chero musanganiswa-wezwi musanganiswa uye tinotarisa pamisoro nenzvimbo kuti tione kuti vatengi vedu vari kukura sei pamberi pekutsvaga kwavo. Muchokwadi, hazvingasviki kufunga kuti maalgorithms ekutsvagisa masosi asina nzvimbo kana marangi… asi nekuti madomeni akasunganidzwa kwavari ane kukosha nemvumo kune mamwe mabhenji kana nzvimbo.
Chirevo: Beyond the Backlink
Icho chinotofanira kunge chiri chemuviri backlink zvekare? Citations vanogona kunge vachikwira mukurema kwavo mune yekutsvaga injini algorithms. Chirevo ndiko kutaurwa kweshoko rakasarudzika mukati mechinyorwa kana kunyangwe mukati memufananidzo kana vhidhiyo. Chirevo munhu akasarudzika, nzvimbo kana chinhu. Kana DK New Media inotaurwa pane imwe nzvimbo asi mamiriro acho ari Marketing, nei injini yekutsvaga isina kurema kutaurwa uye kuwedzera chinhanho chezvinyorwa pa DK New Media inosangana nekutengesa.
Kune zvakare mamiriro ezvinyorwa zviri padyo neiyi link. Iyo domeini inonongedza kune yako duraini kana dandemutande kero ine zvinoenderana nemusoro wenyaya wauri kuda kuverengerwa? Iri peji rine backlink iri kunongedzera kudomeini yako kana kero yewebhu inoenderana nemusoro wenyaya? Kuti uongorore izvi, mainjini ekutsvaga anofanirwa kutarisa kupfuura iwo mavara mune anchor zvinyorwa uye ongorora zvese zvirimo zvepeji uye nemvumo yedomeini.
Ini ndinotenda algorithms ari kushandisa iri zano.
Munyori: Rufu kana Kuberekwazve
Makore mashoma apfuura, Google yakaburitsa markup iyo yaibvumidza vanyori kusunga masayiti avakanyora uye zvemukati zvavakagadzira kudzoka kuzita ravo uye nehukama hwehukama. Uku kwaive kufambira mberi kunoyevedza nekuti waigona kuvaka nhoroondo yemunyori uye wotora chiremera chavo pane dzakananga misoro. Kudzokorora makore gumi ekunyora nezve kushambadzira, semuenzaniso, zvaisakwanisika.
Nepo vanhu vazhinji vachitenda kuti Google yakauraya kunyora, ini ndinotenda ivo vakauraya chete markup. Ini ndinofunga pane mukana wakanaka kwazvo wekuti Google yakango shandura maalgorithms ayo ekuziva vanyori vasina markup.
Iyo Era yeKubatanidza Kuwana
Kutaura chokwadi, ndakafarira kupera kweindasitiri ye backlinking. Yakanga iri nguva yekubhadhara-kutamba apo makambani ane homwe dzakadzika akabhadhara masangano eSEO aine zviwanikwa zvakanyanya kugadzira backlinks. Kunyange isu taive takaoma pabasa kugadzira mawebhusaiti makuru uye zvisingaite zvemukati, isu takatarisa sezvo edu masosi akadonha nekufamba kwenguva uye isu takarasikirwa chakakosha chikamu chedu traffic. Isu taifanira kutarisa zvakanyanya pasocial media nekusimudzira kuti izwi ribude.
Zvemukati-zvemukati zvemukati, kutaura spamming, uye meta keywords haasisiri anoshanda SEO Maitiro - uye nechikonzero chakanaka. Sezvo injini dzekutsvaga algorithms dzichiwedzera kuwedzera, zviri nyore kuona (uye kusakura) zvirongwa zvekubatanidza zveunyengeri.
Pamusoro pegore rapfuura, yedu organic organic injini yekutsvaga yakakwira 115%! Izvo zvaisave zvese algorithms. Isu takavaka saiti inoteerera kwazvo inoshanda nemazvo pane nharembozha nematafura. Isu takashandura saiti yedu yese kuita yakachengeteka saiti ine SSL chitupa. Asi isu tiri kushandisawo nguva kuongorora data rekutsvaga pamwe nekuzivisa misoro (seizvi) iyo vateereri vedu vanofarira.
Ini ndinoramba ndichiudza vanhu kuti SEO yaimbova dambudziko remasvomhu, asi ikozvino yadzoserwa kune vanhu dambudziko. Nepo paine mamwe marongero ekuvimbisa kuti saiti yako iri yekutsvaga injini inoshamwaridzika, chokwadi ndechekuti zvemukati zvemukati zvakanaka mushe (kunze kwekuvharira injini dzekutsvaga). Zvakawanda zvemukati zvinowanikwa uye zvakagovaniswa munharaunda, uye zvobva zvataurwa uye zvakabatanidzwa nenzvimbo dzakakodzera. Uye ndiko backlink mashiripiti!
Kuita iwe pachako hakuitwe